Xukuumadda iyo Alliansen oo isku afgartay shahaadooyin tijaabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto Dan Hansson / SvD /TT.
Xukuumadda iyo Alliansen oo isku afgartay shahaadooyin tijaabo
Shahaado fasalka afraad
La daabacay torsdag 12 februari 2015 kl 12.32
Xukumadda iyo xisbiyada Alliansen ayaa shalay isku afgartay in 100 iskuul lagu tijaabiyo shaahado la sii arddeyda dhiga fasalka afraad.
Maanta shahaadada arddeyda waxaa la siiyaa laga billaabo fasalka lixaad.
Wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin ayaa asaga weligiis diidanaa in shahaadooyin arddeyda la siiyo laga billaabo fasalka afraad. Laakiin shalayto ayuu xisbiyada Alliansen la galay isafgarad ah in lagu tijaabinayo 100 iskuul oo ayaga iyo waalidka arddeyda iskood u doonayaan in shahaada arddeyda la siiyo laga billabo fasalka afraad. Wasiirka oo sharaxahaya sabab ku kaliftay in uu is-afgaradkaan galo ayaa yeri sida tan:
- Waxaa jira aqlibiyad baarlamaani ah oo ka kooban xisbiyada Alliansen iyo xisbiga Sverigedemokraterna, kuwaas oo doonaya in fasalka afraad laga billaabo shahaadooyinka, inkastoo ururada macallimiinta, dadka ka shaqeeya iskuulka, arddeyda, heyaddaha dowliga ah ee iskuulka iyo xataa cilmibaaristaba ay dhahayaan in aysan aheyd wado sax ah. Sidaas darteed ayaan qabaa in ay ka fiican tahay in aan wado fariisano, masuuliyadeena qaadano oo isku afgarano; haddii ay jiraan boqol iskuul oo macallimiinta iyo waalidkuba ay xiiseynayaan shahaadin laga billaabo fasalka afraad, markaas ay ka qayb geli karaan tijaabooyin arrinkan lagu sameeyo oo xadidan, waana boqol iskuul keliya oo ka mid ah 5 000 ee iskuul ee dalka, ayuu yeri wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin. Laakiin cilmibaarista cusub oo guddiga Vetenskapsrådet sameeyey dhawaan ayaa muujineysa in shahaadada aysan muhiimad u lahayn sida ay arddeyda wax u bartaan . weliba cilmibaarista waxay sidoo kale muujisey in arddeyda aan waxbarashada ku fiicneyn shahaadada uga sii darto saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelato waxbarashadooda.
Sida is afgaradka shalay gaareen xukumadda iyo alliansen dhigayso; madaxa iskuulka oo kaashanaya macallimiinta iyo waalidka ayaa wado jir u go’aamin kara in iskuulka ka qayb qaato tijaabada shahaado ee ah shahaado fasalka afraad.
Masuuliyadda waxbarashada hoose iyo iskuulada waxay dalkan Sweden hoos timaadaa degmooyinka dalka. Waxaana imminka degmooyin badan ka soo yeeraya in aysan arrinatn ka qayb qaadan doonin. Degmooyinkas ayaa u badan degmooyinka ay maamulaan xisbiyada casaan gaduudka laysku yiraahdo. Stockholm ayaa ka mid ah degmooyinka aan ka qayb qaadan doonin tijaabadan. Olle Brell oo ah socialdemokrat islamarkaana u qaabilsan iskuulka maamulka Stockholm, ayaa arrintan sida tan ka yeri:
- Waxaan cadeyneynaa in aanan dalban doonin oo aanan ka qaybgeli doonin arrinat, mana jiri doona iskuulka ka mid ah iskuulada degmadeena maamulsho oo ka qaybgalaya, ayuu yeri.
Waxuuna raaciyey in ay ayagu dadaalka gelinayaa kor u qaadidda mushaarka macallimiinta iyo wanaajinta fiyoobiyada arddeyda taas oo aan qabno ayuu yeri in ay kor u qaadi doono natiijada iskuulka. Ma dooneyno ayuu yeri in aan ku darno dadaaladeenan wanaagsan tijaabooyin aan ognahay in ay yahiin ku xun.
Balse tijaabadan ayaa hirgelinteeda laga billaabi doonaa sannadka 2017 iyada oo natiijadeeda la soo hordhigi doono baarlamaanka dalka ugu horeyn sannadka 2020. "Waxii intaa ka horeeyey shahaadooyinka in sidooda loo daayo ayaan isku afgaranay xisbiyada Alliansen" ayuu yeri Gustav Fridolin, wasiirka waxbarashada.